၀၃:၃၁၊ ၂၁ ဒီဇငျဘာ ၂၀၁၅ ရကျနကေ့ မူ
၁၂၂ ဘိုကျ ပေါငျးထညျ့ခဲ့သညျ , ပွီးခဲ့သညျ့ ၄ နှဈ
၀၃:၀၈၊ ၂၁ ဒီဇငျဘာ ၂၀၁၅ ရကျနကေ့ မူ (ပွငျဆငျရနျ)
("Symphonic Metal symphonic metal သည်..." အစခြီသော စာလုံးတို့နှငျ့ စာမကျြနှာကို ဖနျတီးလိုကျသညျ)
၀၃:၃၁၊ ၂၁ ဒီဇငျဘာ ၂၀၁၅ ရကျနကေ့ မူ (ပွငျဆငျရနျ) (နောကျပွနျ ပွနျပွငျရနျ)
''Symphonic metal''' သညျ heavy metal ဂီတ၏မြိုးခှဲတဈမြိုးဖွဈသညျ။ သိပျသညျးသော ဒရမျ၊ ဂီတာနှငျ့classical ဂီတ၏အစိတျအပိုငျးတို့ဖွဈပွီး symphonic instrument, choir နှငျ့ occasion နှငျ့
full symphony orchestralတို့ပါဝငျသညျ။ ဤအမြိုးအစား၏လူသိမြားသောတီးဝိုငျးမှာ ဖငျလနျတီးဝိုငျး Nightwish ဖွဈသညျ။ power metal ၏သတိရစနေိုငျသော keyboard မြားမှာ ဤမြိုးခှဲ၏မကွာခဏ အရေးပါသော အရာတဈမြိုးဖွဈသညျ။ symphonic metalတီးဝိုငျးမြား၏ မကွာခဏထူးခွားခကျြမှာ အမြိုးသမီးအဆိုရှငျမြားဖွဈပွီး nickname အဖွဈ opera metal (သို့) operatic metal ဟုလညျးချေါသညျ။ အခွားထူးခွားခကျြမှာ ဒုတိယမွောကျ အဆိုရှငျ၏ growl သံမြား
အသုံးပွုထားသော film score မြားတှငျ ကွီးမားစှာအာရုံစိုကျထားသညျ။
symphonic metal သည် heavy metal ဂီတ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သိပ်သည်းသော ဒရမ်၊ ဂီတာနှင့်classical ဂီတ၏အစိတ်အပိုင်းတို့ဖြစ်ပြီး symphonic instrument, choir နှင့် occasion နှင့်
full symphony orchestralတို့ပါဝင်သည်။ ဤအမျိုးအစား၏လူသိများသောတီးဝိုင်းမှာ ဖင်လန်တီးဝိုင်း Nightwish ဖြစ်သည်။ power metal ၏သတိရစေနိုင်သော keyboard များမှာ ဤမျိုးခွဲ၏မကြာခဏ အရေးပါသော အရာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ symphonic metalတီးဝိုင်းများ၏ မကြာခဏထူးခြားချက်မှာ အမျိုးသမီးအဆိုရှင်များဖြစ်ပြီး nickname အဖြစ် opera metal (သို့) operatic metal ဟုလည်းခေါ်သည်။ အခြားထူးခြားချက်မှာ ဒုတိယမြောက် အဆိုရှင်၏ growl သံများ
ဖြင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုဖြစ်ပြီး gothic metal ၏ ကြမ်းတမ်းသော လက္ခဏာများပါဝင်သည်။ ထူးခြား၍ အရေးပါသော symphonic metal တီးဝိုင်းများမှာ ဖင်လန်တီးဝိုင်း Nightwish၊ ဆွီဒင်တီးဝိုင်း Therion နှင့် နယ်သာလန်တီးဝိုင်း Epica တို့ဖြစ်သည်။ ငုင်းတီးဝိုင်းများသည် ဤအမျိုးအစားထဲတွင် ကြီးမားစွာ
အသုံးပြုထားသော film score များတွင် ကြီးမားစွာအာရုံစိုက်ထားသည်။
သုံးခွငျးကို ရှောငျကွညျကွသညျ။ live symphony orchestra (သို့) album မြားကို choirဖွငျ့ orchestral backing track မြားကို အသုံးပွု၍ အသံသှငျးကွသညျ။ (သို့) sequencerထဲတှငျ virtual software မြားကို အသုံးပွု၍အသံသှငျးကွသညျ။ နကျရှိုငျး၍ ရှုပျထှေးသော arrangement မြားဖွဈသညျ။ ဤပုံစံထဲမှ ဂီတနှငျ့ဘစျေ့အလုပျတို့ကို ကွညောရနျခကျခဲသညျ။ gothic metal ကဲ့သို့ black metal ၊ death metal၊ power metal နှငျ့ progressive metal တို့နှငျ့ rock နှငျ့ metal ပုံစံမြား
၏ synthesis တို့ကို ဖျောပွကွပါသညျ။ သို့သျော gothic metal ကဲ့သို့ မတူညီပါ။ ကှဲပွားသော အကွိမျရမြေားနှငျ့အတူ ဤမြိုးခှဲထဲရှိ တီးဝိုငျးအမြားစုသညျ ထို instrument ပိုမိုလှယျကူစရေနျ အသုံးပွုကွသညျ။ နားဝငျခြို၍ မှတျမိလှယျသော melody မြားသညျ metal မြိုးခှဲမြားမှာ တဈခုဖွဈသော symphonic metalကို ပွုလုပျကွသညျ။ သီခငျြးမြားမှာ အခွားmetalမြိုးခှဲမြားထကျ ပြျောရှငျဖှယျရာဖွဈသျောလညျး မွငျ့မားသော atmospheric ဖွဈသညျ၊ သခွေငျးတရားနှငျ့အတူ သီခငျြးမြားသညျ အရေးပါသော major-key fanfares နှငျ့ထူးခွားသညျ။ ထူးခွားခကျြမှာ creating mood နှငျ့ atmosphere သညျ keyboard sound ၏ရှေးခယျြမှုဖွဈသညျ။ စာသားအကွောငျးအရာမြားသညျ ကယျြပွနျ့စှာ ဖုံးအုပျထားသညျ။
ဆိုင်ပါသည်။ဆိုငျပါသညျ။ operatic lead vocal များဖြင့်မြားဖွငျ့ ထူးခြားသည်။ထူးခွားသညျ။ Nightwish (Tarja Turuner), Epica, Haggard, Therion, Operatika, Dremora, Dol Ammad, Vision of Atlantis, Aesma Daeva, Almora တို့ပါဝင်သည်။တို့ပါဝငျသညျ။ operatic style သည်သညျ symphonic metal သို့သို့ ချည်နှောင်ထားသည်။ခညျြနှောငျထားသညျ။ avant-grade metal, progressive metal, gothic metal နှင့်melodicနှငျ့melodic metal များတွင်လည်းမြားတှငျလညျး ပေါ်ပေါက်ပျေါပေါကျ▼
symphonic metalတွင် အဓိက ဂီတဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုမှာ gothic metal၊ power metal နှင့်classical ဂီတတို့ဖြစ်သည်။
music workstation keyboard များနှင့် orchestraများမှာ မကြာခဏဂီတ၏ focal point ဖြစ်
သည်။ ဤအရည်အသွေးမှာ အခြားmetal မျိုးခွဲများမှ ကွဲပြားသောမျိုးခွဲဖြစ်သည်။ အခြားတူရိယာများ
မှာ ဂီတများ၊ ဘေ့စ်နှင့်ဒရမ်တို့ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးကျပ်တည်းမှုအပေါ်မူတည်၍ တီးဝိုင်းများလူသိနည်း
ခြင်းမှာ ထူးခြားသော လက္ခဏာဖြစ်သည်။ အချို့ symphonic metal တီးဝိုင်းများမှာ keyboard များ
သုံးခြင်းကို ရှောင်ကြည်ကြသည်။ live symphony orchestra (သို့) album များကို choirဖြင့် orchestral backing track များကို အသုံးပြု၍ အသံသွင်းကြသည်။ (သို့) sequencerထဲတွင် virtual software များကို အသုံးပြု၍အသံသွင်းကြသည်။ နက်ရှိုင်း၍ ရှုပ်ထွေးသော arrangement များဖြစ်သည်။ ဤပုံစံထဲမှ ဂီတနှင့်ဘေ့စ်အလုပ်တို့ကို ကြေညာရန်ခက်ခဲသည်။ gothic metal ကဲ့သို့ black metal ၊ death metal၊ power metal နှင့် progressive metal တို့နှင့် rock နှင့် metal ပုံစံများ
၏ synthesis တို့ကို ဖော်ပြကြပါသည်။ သို့သော် gothic metal ကဲ့သို့ မတူညီပါ။ ကွဲပြားသော အကြိမ်ရေများနှင့်အတူ ဤမျိုးခွဲထဲရှိ တီးဝိုင်းအများစုသည် ထို instrument ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် အသုံးပြုကြသည်။ နားဝင်ချို၍ မှတ်မိလွယ်သော melody များသည် metal မျိုးခွဲများမှာ တစ်ခုဖြစ်
သော symphonic metalကို ပြုလုပ်ကြသည်။
သီချင်းများမှာ အခြားmetalမျိုးခွဲများထက် ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာဖြစ်သော်လည်း မြင့်မားသော atmospheric ဖြစ်သည်၊ သေခြင်းတရားနှင့်အတူ သီချင်းများသည် အရေးပါသော major-key fanfares နှင့်ထူးခြားသည်။ ထူးခြားချက်မှာ creating mood နှင့် atmosphere သည် keyboard sound ၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ စာသားအကြောင်းအရာများသည် ကျယ်ပြန့်စွာ ဖုံးအုပ်ထားသည်။
power metal နှင့် opera (symphonic progressive rock) တကယ်မရှိသော အကြောင်းအရာများ
ကို စိတ်ကူးယာဉ်ခြင်းနှင့် ဒဏ္ဍာရီနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို တွေ့ရှိရသည်။
ဤအမျိုးအစားမှ တီးဝိုင်းများမှာ အမျိုးသမီးအဆိုရှင်နှင့် ထူးခြား၍ ထုံးစံအားဖြင့် soprano ဖြစ်သည်။ ငုင်းမှာ တီးဝိုင်းအများကြီးနဲ့ဆိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့် female-fronted တီးဝိုင်းများနဲ့
▲ဆိုင်ပါသည်။ operatic lead vocal များဖြင့် ထူးခြားသည်။ Nightwish (Tarja Turuner), Epica, Haggard, Therion, Operatika, Dremora, Dol Ammad, Vision of Atlantis, Aesma Daeva, Almora တို့ပါဝင်သည်။ operatic style သည် symphonic metal သို့ ချည်နှောင်ထားသည်။ avant-grade metal, progressive metal, gothic metal နှင့်melodic metal များတွင်လည်း ပေါ်ပေါက်
“Yeah! Yeah! Die! Die! Death Metal Symphony in Deep C” album ဖြစ်သည်။ဖွဈသညျ။ operatic female vocal များ၊မြား၊ classical instrumentation နှင့်နှငျ့ progressive element များသည်မြားသညျ Dark Tranquillity ၏ sound ဖြစ်လာခဲ့သည်။ဖွဈလာခဲ့သညျ။ ၁၉၉၆အလယ်တွင်၁၉၉၆အလယျတှငျ Rageသည်Rageသညျ Lingua Mortis ကိုဖြန်ချီခဲ့သည်။ကိုဖွနျခြီခဲ့သညျ။ တီးဝိုင်းသည်တီးဝိုငျးသညျ Prague Symphony Orchestra ဖြစ်သည်။ဖွဈသညျ။▼
အစောပိုင်းsymphonic metal တီးဝိုင်းသည် အမေရိကန်thrash metal အုပ်စုဖြစ်သော Believer ဖြစ်ပြီး သူတို့၏ ၁၉၉၁ခုနှစ် album “Sanity Obscure” တွင်ပါဝင်သော Dies Irae သီချင်း
သည် Therion နှင့် Nightwish တီးဝိုင်းတို့ကို operatic သို့ ချဉ်းကပ်စေခဲ့သည်။ Jeff Wagner အရ သူ၏ Mean Deviation တွင် ထိုသီချင်းသည် metal သမိုင်းကိုအရေးကြီးစွာ ပြောင်းလဲခဲ့သည်ဟုဆို
သည်။ symphonic metal ၏ အရင်းအမြစ်ကို အစောပိုင်း death metal နှင့် gothic metal တီးဝိုင်းများတွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သူတို့၏ဂီတတွင် symphonic အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုထားသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် swiss extreme metal တီထွင်သူဖြစ်သူ Celtic Frost ၏၁၉၈၇တွင် ထွက်ရှိသော Intro the Pandemonium album သည် symphonic metal တီထွင်သူ Therion ကိုလှုံဆော်စေခဲ့သည်။
အခြားအစောပိုင်းလွှမ်းမိုးမှုများမှာ ဖင်လန် progressive metal တီးဝိုင်း Waltan ၏ album
▲“Yeah! Yeah! Die! Die! Death Metal Symphony in Deep C” album ဖြစ်သည်။ operatic female vocal များ၊ classical instrumentation နှင့် progressive element များသည် Dark Tranquillity ၏ sound ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၆အလယ်တွင် Rageသည် Lingua Mortis ကိုဖြန်ချီခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းသည် Prague Symphony Orchestra ဖြစ်သည်။
Nightwish နှင့် Within Temptation တို့၏ ၁၉၉၇တွင် ထွက်ရှိခဲ့သော ပထမဆုံးalbumများ
တွင် Therion ၏ symphonic ဖြင့် ကြီးမားစွာလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ Within Temptationသည်
gothic metal ဖြင့် ပို၍ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ symphonic metal တီးဝိုင်းများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၀အစောပိုင်းတွင် အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ Fain Fell Within, After Forever, Epica, Delain, Haggard, Leaves’ Eyes, Xandria နှင့် Edenbridge ပါဝင်သည်။ keyboard နှင့် အမျိုးသမီးအဆိုရှင်ဖြင့် ထင်ရှားသည်။ symphonic metalသည် တီးဝိုင်းများဖြင့် သီချင်းများနှင့် album ကို အသုံးပြုလာကြသည်။ ငုင်းမှာ death metal, doom metal, gothic metal, power metal (သို့) black metal တို့တွင် အရင်းခံသည်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/281660" မှ ရယူရနျ